Football Khabar » रिसायो पिएसजी : नेइमारमाथि ‘कारबाही’ गर्दै !
रिसायो पिएसजी : नेइमारमाथि ‘कारबाही’ गर्दै !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीले विश्वकीर्तिमानी मूल्यमा अनुबन्ध गरेका ब्राजिलियन खेलाडी नेइमारमाथि कडा ‘एक्सन’ लिने भएको छ । फ्रेन्च मिडियाका अनुसार पिएसजीले नेइमारले क्लबको मर्यादा र अनुशासन तोडेको भन्दै कारबाहीको तयारी गरेको हो ।
सोमबारदेखि पिएसजीले प्रि–सिजनको अभ्यास थालेको थियो । तर, नेइमार भने तालिममा सहभागी भएका छैनन् । प्रि–सिजनको पहिलो दिन नै अभ्यासमा उपस्थित नभएपछि क्लब नेइमारसँग रुष्ट बनेको छ ।
नेइमार तालिममा नआएको र आउन नसक्नेबारे कुनै जानकारी पनि नदिएकाले क्लब उनमाथि कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । ‘बिबिसी’ का अनुसार पिएसजीका खेल निर्देशक लियोनार्दोले एक अन्तर्वार्तामा नेइमार पिएसजी छाड्न योजनामा रहेकाले उनी तालिममा नआएको हुनसक्ने भए पनि उनले तालिममा आउन नसक्नेबारे क्लबलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
‘हरेक खेलाडीले क्लबको नियम र अनुशासन मान्नुपर्छ । तर, नेइमारले अनुशासन तोडेका छन् । उनीमाथि क्लबले कडा एक्सन लिनेछ,’ लियोनार्दोले भने ।
यसअघि कोपा अमेरिका खेल्न राष्ट्रिय टोलीमा पुगे पनि नेइमार चोटका कारण टोलीबाहिर रहेका थिए । त्यसअघि पनि उनी पिएसजीमा छँदैखेरि आगामी सिजनका लागि लिग वान र च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिबन्धमा परेका थिए भने लामो समय चोटबाट गुज्रिएका थिए । यी सबैबाट पिएसजी नेइमारसँग खुसी छैन । नेइमार आगामी सिजन लिग वान र च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिबन्धमा पर्नुको कारण नेइमारको गलत व्यवहारलाई ठानेको छ ।
पछिल्लो समय नेइमारले पिएसजी छाडेर पूर्वक्लब बार्सिलोना जान चाहेको चर्चा चले पनि पिएसजी उनलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न तयार छैन । पिएसजीले बार्सिलोनाबाट २ वर्षअघि विश्वकीर्तिमानी २२२ मिलियन युरोमा खदि र गरेका नेइमारलाई ३०० मिलियनभन्दा कममा बेच्न तयार छैन भने बार्सिलोना २०० मिलियनभन्दा बढी हाल्ने पक्षमा छैन ।
प्रकाशित मिति २४ असार २०७६, मंगलवार ०४:४४